Akụkọ - Broadband, obere-okirikiri okirikiri infrared continuum dabere na intra-pulse iche ugboro ọgbọ na BGSe kristal
Ọgbọ nke octave-spanning mid-infrared site na iji BGSe na-enweghị atụ kristal
Dr.JINWEI ZHANG na ndị otu ya na-eji sistemụ Cr: ZnS laser na-ebugharị mkpụrụ osisi 28-fs na ntụgharị dị ogologo nke 2.4 µm bụ isi iyi mgbapụta, nke na-eme ka ọdịiche dị iche iche dị na BGSe kristal. N'ihi nke a, enwetara bredband agbatị agbatị agbatị site na 6 ruo 18 µm. Ọ na-egosi na kristal BGSe bụ ihe na-ekwe nkwa maka brọdband, ọgbọ ole na ole na-etiti infrared site na ntụgharị ntụgharị ugboro ugboro na isi iyi mgbapụta femtosecond.
Mid-infrared (MIR) nke dị na 2-20 µm bara uru maka njirimara kemịkal na nke ndu n'ihi ọnụnọ nke ọtụtụ ahịrị ndị na-amịkọrọ akwara na mpaghara a. Ihe omuma, uzo ole na ole na nkpuchi nke MIR buru ibu nwere ike ime ka ngwa ohuru di ka mirco-spectroscopy, femtosecond pump-probe spectroscopy, na ihe di iche iche di omimi di omimi rue ugbu a otutu atumatu nwere
e mepụtara iji mepụta radieshon MIR, dịka synchrotron beam lines, quantum cascade lasers, supercontinuum sources, optical parametric oscillators (OPO) na optical parametric amplifiers (OPA). Atụmatụ ndị a niile nwere ike na adịghị ike nke ha na usoro nke mgbagwoju anya, bandwidth, ike, arụmọrụ, na oge nkwụsị. N'ime ha, ihe dị iche iche nke ikuku (IDFG) na-adọta uche na-eto eto site na mmepe nke ike femtosecond 2 µm lasers nke nwere ike imepụta obere kristal non-oxide na-abụghị nke na-enweghị ike ịmepụta ọkụ MIR dị elu. E jiri ya tụnyere OPOs na OPAs ndị a na-ejikarị eme ihe, IDFG na-enye ohere mbelata nke mgbagwoju anya sistemụ na mmelite nke ntụkwasị obi, ebe ọ bụ na a na-ewepụ mkpa ọ dị ịhazi mbadamba abụọ dị iche iche ma ọ bụ oghere dị na oke nkenke. E wezụga nke ahụ, mmepụta MIR bụ nke na-ebu envelopu-phase (CEP) nke nwere IDFG.
Mpempe akwụkwọ nnyefe nke 1-mm-thick uncoated BGSe kristal nke DIEN TECH nyere. Inset ahụ na-egosi kristal a na-eji na nnwale a.
Mbido Mbido nke MIR ọgbọ na kristal BGSe. OAP, anya-axis parabolic mirror na irè na-elekwasị anya ogologo nke 20 mm; HWP, ọkara-efere efere; TFP, obere-ihe nkiri polarizer; LPF, nzacha ogologo oge.
Na 2010, e ji usoro Bridgman-Stockbarger mepụta chalcogenide na-abụghị nke kristal, bụ BaGa4Se7 (BGSe). O nwere uzo uzo di iche site na 0.47 rue 18 µm (dika egosiri na Fig 1) ya na coefficients adighi nke d11 = 24.3 pm / V na d13 = 20.4 pm / V. Window nghọta nke BGSe sara mbara karịa ZGP na LGS ọ bụ ezie na enweghị atụ dị ala karịa ZGP (75 ± 8 pm / V). N'adịghị ka GaSe, BGSe nwekwara ike gbue ya na akụkụ achọrọ na-adaba ma nwee ike bụrụ ihe mkpuchi.
E gosipụtara ntọala nnwale ahụ na Fig 2 (a). A na-ebute mkpụrụ osisi na-anya ụgbọ ala site na ọnọdụ Kerr-lens nke kpọchiri n'ụlọ: nlọ ọrụ ZnS nwere polycrystalline CrR: ZnS kristal (5 × 2 × 9 mm3, nnyefe = 15% na 1908nm) dị ka uru usoro pumped by a Tm-doped eriri laser na 1908nm. Osisi osisillation dị n'ime oghere na-ebugharị na-anapụta mkpụrụ osisi 45-fs na-arụ ọrụ na ọnụego ugboro ugboro nke 69 MHz na ike nke 1 W na ntụgharị ogologo nke 2.4 µm. A na - eme ka ike ahụ dị ike na 3.3 W na ụlọ nke abụọ na - ebu polycrystalline Cr: ZnS amplifier (5 × 2 × 6 mm3, nnyefe = 20% na 1908nm na 5 × 2 × 9 mm3, nnyefe = 15% na 1908nm), na ogologo oge a na-ewepụta ihe a na --emepụta ya na ngwa elektrọnik na - arụ ọrụ nke abụọ - SHG-FROG
Ha gosipụtara isi mmalite MIR na kristal BGSe dabere na usoro IDFG. A femtosecond Cr: ZnS sistemụ laser na wavelength nke 2.4 wasm ka eji dị ka isi iyi na-anya ụgbọ ala, na-enyere ohere ịpụta n'otu oge site 6 ruo 18 µm N'ihe kachasị mma anyị maara, nke a bụ oge mbụ a na-amata brọdband MIR na kristal BGSe. Mmepụta a na-atụ anya ka ọ nwee oge ole na ole ga - eme ka ọ kwụsie ike na ya. E jiri ya tụnyere kristal ndị ọzọ, nsonaazụ mbido ya na BGSe na-egosi ọgbọ MIR nwere ụdị bandwidth sara mbara (karịa karịa ZGP na LGS) n'agbanyeghị na enwere ike dị ala na ntụgharị ntụgharị. Enwere ike ịtụ anya ike dị elu karịa site na njikarịcha kachasị nke nha elekwasị anya na kristal. Dị mma kacha mma nke nwere oke mbibi dị elu ga-aba uru maka ịbawanye ike MIR na ike ntụgharị. Ọrụ a na-egosi na BGSe kristal bụ ihe na-ekwe nkwa maka brọdband, ọgbọ MIR na-agbanwe agbanwe.
Nweta akwụkwọ PDF
Post oge: Dec-07-2020